आज मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबारको हे'र्नुहोस् -
Homeसमाचारआज मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबारको हे’र्नुहोस्
आज मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबारको हे’र्नुहोस्
April 30, 2021 admin समाचार 289
खान पानमा बिशेष साब’धानी अपनाउनु होला । आफन्तज’नहरु सगँको सम्बन्धमा सा’मान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । स्वास्थमा सामा&न्य समस्या देखा पर्नेछ । अरुको बि’श्वासमा गरीएका कार्यहरुबाट सामान्य तनाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नयाँ लगा’नीका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि रहनु पर्नेछ ।
ब्यापार ब्यवसा’यको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्र’जनहरु बाट साथ सह’योग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । अध्यन अध्या’पनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
मी’थुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)
अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँ’ईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । अरुको सह’योग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कुरा काट्रने ब्यक्ति हरुको बृद्यि हुनेछ । शत्रु सबल रहलान । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । आजको सा’मान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ ।
मनोर’ञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य आम्दानि हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ कार्यको थाल’निले गर्दा मन प्रशन्न रहला । सामान्य अ’प्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहे’कोछ ।
भौतिक श्रोत साध’नको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । दाम्पत्य सम्ब’न्धमा सुधार आउनेछ । परीश्रम अ’नुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । सबारी साधनको प्र’योगमा ध्यान लिनु होला । तपाईको प्रग’तिमा आरीस गर्ने हरुबाट बच्नु पर्ला ।
कामको क्षेत्रमा भने साधा’रण झन्झट तथा अप्जस सहनु पर्ला । आय आम्दानि मा बृद्यिहुने योग रहेको छ । भौतिक स्रोत साध’नको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर प्राप्त रहनेछ । मानसिक चन्च’लताले गर्दा कार्य सम्पा’दनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला ।
मान प्र’तिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । मधुर बाणी’का कारण बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । कोध्रको का’रण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । बिश्वासिला ब्यत्ति’त्वहरुबाट धोकाहुनसक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मान्यज’नको भेटघाट बाट मन प्रशन्न रहला ।सा’मान्य यात्राको सम्भाबना रहन सक्छ । कार्य क्षेत्रमा सा’मान्य झन्झट ब्यहोनु पर्ला । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साजेदारी काममा हात नहालेकै बेस हुने छ । जिवन साथि’को साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसा’यका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ ।
बिश्वा’सिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । दाम्पति बिच सा’मान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ । खराब संंगतको कारणले कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । मनोबिलासिताका सामा’नहरुमा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
नयाँ का’र्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षम’तामा बृद्धि हुनेछ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । रचनात्मक कार्य तथा मनोर’ञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानीका दीर्घ’कालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।
कार्य’सम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । परीबारका कोहि सदस्य हरुको स्वास्थ क्षेत्रमा झ’मेला पर्न सक्छ । बौधिक बिकास तथा विद्या प्राप्ति योग रहेको । सभा सम्मेल’नमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आफ्नो कुसलताले गर्दा आम्दा’निको क्षेत्र सबल रहने छ ।
मनोर’ञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामा’न्य झन्झट रहन सक्छ । अरुको बसमा गरी’एको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । कार्य सम्पा’दनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला ।
December 23, 2020 admin समाचार 3194
चर्चित भारतीय गा’यिका नेहा कक्कडले बिहे गरेको दुई महिना नबि’त्दै पुक्क उठेको पेट सहितको फोटो सार्व’जनिक गरिन् । उनको यो फोटोले भारतीय मिडियामा त’रंग ल्यायो । नेहाका दाजु टोनी कक्कडले बहि’नीलाई बधाई दिँदै म मामा
January 12, 2021 admin समाचार 2711
October 27, 2020 admin समाचार 4878
संर’क्षक प्रेम बिष्टले सर्प पाल’न सुरु गरेका छन । बन कार्य’लयमा काम गर्ने प्रेमले वि’भिन्न ठाउँमा गएर घर घरबाट सर्प समा’तेर ल्याउने गरेका छन । सर्प समा’त्न सिपालु प्रेम बिष्टले स’र्पलाइ अ’साध्यै माया गरेर पाल्छन
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (173072)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (166926)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (166554)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (166362)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (165395)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (164030)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (163559)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (162039)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (156757)